डेटा स्क्रैप गर्न चाहनुहुन्छ? दस उपयोगी वेब स्क्रैपिंग सेवा तपाईले प्रयास गर्नु पर्छ Semalt को अनुसार
वेब स्क्रैपिंग एक जटिल प्रविधि हो जसको संख्या स्क्रैपिंग टूल्स . यी उपकरणहरू विभिन्न वेबसाईटहरूसँग एकैचोटी अन्तरक्रिया गर्दछ जस्तै हामी जब ब्राउजर फायरफक्स वा क्रोम जस्तै प्रयोग गर्दछौं. यसबाहेक, वेब स्क्रैपिंग प्रोग्रामहरू हटाइएको डाटालाई पढ्न योग्य ढाँचामा प्रदर्शन गर्दछ. उनीहरूले बढि सुराग उत्पन्न गर्न र हाम्रो व्यवसायबाट उत्तम प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन्.
सर्वश्रेष्ठ वेब स्क्रैपिंग उपकरण:
यहाँ हामीले सर्वोत्तम र सबै भन्दा उपयोगी वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरूको सूची दिएका छौं.
1. आयात गर्नुहोस्. io
आयोत. io यसको उन्नत प्रविधिको लागि प्रसिद्ध छ. उपकरण पेशेवरहरू र गैर-पेशेवरहरूको लागि उपयुक्त छ. यो वेब स्क्रैपिंग उपकरण न केवल वेबसाइटहरूको एक मात्र पहुँच पहुँच र स्क्रैप गर्दछ तर निकासी डाटा CSV मा निर्यात गर्दछ।. हजारौं पृष्ठहरू र PDF फाइलहरू आयातको साथ एक घण्टा भित्र स्क्रैप गर्न सकिन्छ. io. प्लस बिन्दु यो हो कि तपाईंलाई कुनै पनि कोड लेख्न आवश्यक छैन. यसको सट्टा, यो उपकरणले तपाइँका आवश्यकताहरूमा आधारित 1000 भन्दा बढी API हरू बनाउँछ.
2. डेक्स. io
Dexi. io CloudScrape को रूपमा पनि चिनिन्छ. यो वेब स्क्रैपिंग र डेटा निष्कर्षण प्रोग्राम प्रोग्रामर र फ्रीलांसरहरूको लागि उपयुक्त छ. यो व्यापक रूपमा यसको ब्राउजर-आधारित डाउनलोडर र सम्पादकको लागि जान्छ जुन तपाईंको हार्ड ड्राइवमा पहुँच गर्न र हटाइएको डेटा डाउनलोड गर्न सजिलो बनाउँछ।. साथै, यो राम्रो वेब क्रलर हो जसले बक्समा डाटा बचत गर्न सक्छ. नेट वा गुगल ड्राइभ. तपाईं पनि आफ्नो डेटा CSV र JSON मा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ.
3. वेबहाउस. io
Webhouse. io सबै भन्दा अचम्मलाग्दो र उत्कृष्ट ब्राउजर आधारित वेब अनुप्रयोगहरू स्क्रैपिंग मध्ये एक हो. यो संरचित डाटा को लागि सजिलो र सीधा पहुँच प्रदान गर्दछ र एक API मा भारी संख्या मा वेब पृष्ठों को सूचकांक को क्षमता हो. तपाईं सजिलै संग आफ्नो डेटा वेबहाउस प्रयोग गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ. io र आरएसएस, एक्सएमएल, र JSON जस्तै ढाँचामा बचत गर्नुहोस्.
प्रति महिना केवल $ 25 संग, तपाईं स्क्रैपिंग हब को सबै अद्भुत सुविधाहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।. यो क्लाउड-आधारित अनुप्रयोग हो जुन तपाईको डाटा निष्कर्षणको राम्रो तरिकामा पूरा गर्दछ. Scrapinghub यसको स्मार्ट प्रोक्सी rotator को लागि सबै भन्दा राम्रो छ जुन bot सुरक्षित वेबसाइटहरु मार्फत क्रल हुन्छ.
5. भिजुअल स्क्रैपर
दृश्य स्क्रैपर अझै अर्को डेटा निकासी र सामग्री खनन कार्यक्रम हो. यसले विभिन्न वेबसाइटहरूबाट जानकारी निकाल्छ, र नतिजा वास्तविक समयमा ल्याईन्छ. तपाईं आफ्नो निकासी डाटा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै SQL, JSON, XML, र CSV.
6. आउटविट हब
यो फायरफक्स एड-अन हो जुन हाम्रो वेब खोजको महत्त्वपूर्ण रूपमा यसको डेटा निष्कर्षण गुणहरू हुन सक्छ।. Outwit Hub समान प्रोग्रामर र वेब विकासकर्ताको बीचमा प्रसिद्ध छ; यो उपकरणले तपाईंको डाटा पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा भण्डार गर्छ, प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस र उत्कृष्ट सेवाहरू प्रदान गर्दछ.
यो सच छ कि स्क्रैपरसँग सीमित डेटाहरू स्क्रैपिंग सुविधाहरू छन्, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाइँको अनलाइन अनुसन्धान सजिलो हुनेछैन।. वास्तवमा, स्क्रैपर विभिन्न उद्यमहरू, एसईओ विशेषज्ञहरू र एप विकासकर्ताहरूको पहिलो छनौट हो. तपाईं क्लिपबोर्डमा डेटा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको इच्छा अनुसार विभिन्न स्प्रिडशिटहरूमा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ. दुर्भाग्यवश, यो उपकरणले तपाईंको वेब पृष्ठहरू क्रल गर्दैन.
8. 80 खुट्टा
यो एक बलियो, लचीला र उपयोगी वेब स्क्रैपिंग अनुप्रयोग हो. तपाइँका आवश्यकताहरु अनुसार 80 पैदल कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, र यो उपकरण केहि सेकेण्डमा आवश्यक जानकारी ल्याउँछ.
Spinn3r सम्पूर्ण वेबसाइटबाट, सामाजिक सञ्जाल सञ्जालहरू, समाचार आउटलेटहरू र निजी ब्लगहरूबाट डाटा ल्याउँछ, जेएसओएस ढाँचामा तपाईंको डेटा बचत गर्नुहोस्।. यसको अद्भुत डाटा निष्कर्षण गुणहरूको अलावा, Spinn3r तपाईंको डेटाको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्दछ र यसलाई अनुमति दिन्छ स्प्यामरहरू चोरी.
10. पार्स हब
पार्सहेब AJAX, कुकीज, जाभास्क्रिप्ट, र रिडिरेक्टरी को उपयोग गरेर वेबसाइटहरु संग संगत छ. तपाईं धेरै वेब पृष्ठहरू क्रल गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईं आवश्यक ढाँचामा डेटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो उपकरण म्याक ओएस एक्स, विन्डोज, र लिनक्स प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ Source .